कुम्मायक–कुस्सायक गोल्डकप चैत २८ देखि « Mechipost.com
प्रकाशित मिति: २६ चैत्र २०७८, शनिबार १८:३८
फिदिम । त्रिशाली मेला तथा पूजाको अवसरमा पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकामा यहि चैत २८ गतेबाट कुम्मायक कुस्सायक अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण गोल्डकप प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ ।
प्रत्येक तीन वर्षमा आयोजना हुने ऐतिहासिक त्रिशाली मेला तथा पूजाको अवसरमा सयपत्री क्लब यासोकको आयोजना तथा कुम्मायक गाउँपालिकाको प्रवद्र्धनमा प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो । प्रतियोगितामा भारतको एक सहित नेपालका विभिन्न सात वटा फुटबल टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने आयोजक क्लबका अध्यक्ष शिव लावतीले जानकारी दिनुभयो ।
यासोकस्थित पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयको खेलमैदानमा उक्त प्रतियोगिता सञ्चालन हुनेछ । आयोजकले प्रतियोगिताको खेल तालिका समेत सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आयोजक सयपत्री क्लब (निलो) ले ब्रदर्श युनाइटेड क्लब झापासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । दोस्रो खेलमा चैत २९ गते केएफसी झापा र खेवाङ फुटबल क्लब ताप्लेजुङवीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
तेश्रो खेलमा चैत ३० गते संगम फुटबल क्लब सुनसरी र केकेएफसी झापा आमेन–सामने हुनेछन् । पहिलो चरणको अन्तिम खेलमा वैशाख १ गते सयपत्री क्लब (रातो) र सिलिगुढी भारतको एसटी ब्रदर्श फुटबल क्लबवीच प्रतिस्पर्धा हुने आयोजकले जनाएको छ ।
प्रतियोगिताको विजेताले रु. ३ लाख ३३ हजार ३३३ तथा उपविजेताले नगद १ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ प्राप्त गर्ने छन् । प्रतियोगितामा हरेक खेलको उत्कृष्ट खेलाडीलाई रु. ५ हजार सहित पुरस्कृत गरिने छ भने विद्यागततर्फका उत्कृष्ट खेलाडीलाई जनही रु. ८ हजार सहित पुरस्कृत गरिने आयोजक संस्थाका अध्यक्ष लावतीले जानकारी दिनुभयो ।
मेलाका अवसरमा फुटवल प्रतियोगितासँगै भलिबल र ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता समेत आयोजना गरिएको छ । यस्तै मेलाका अवसरमा श्रष्टा सम्मान, साँस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरु समेत आयोजना गरिएको त्रिशाली मेला एवं पूजा आयोजक मूल समारोह समितिका अध्यक्ष देवेन्द्रकुमार लावतीले जानकारी दिनुभयो ।